Wararka Maanta: Axad, Mar 25, 2012-Mas'uuliyiin uu ka mid yahay Cali Mahdi Maxamed oo ka qaybgalay Aaskii Madaxweynihii hore ee Soomaaliya
Mas'uuliyiin uu ka mid yahay Cali Mahdi Maxamed oo ka qaybgalay Aaskii Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Axad, Maarso 25, 2012 (HOL) — Madax uu ka mid yahay Cali Mahdi Max'ed ayaa ka qaybgalay aas madaxweynihii hore ee Soomaaliya, marxuum C/llaahi Yuusuf loogu sameeyay maanta degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo uu ku dhashay.
Marxuumka Yuusuf ayaa wuxuu Jimcihii lasoo dhaafay ku dhintay dalka Imaaraadka Carabta isagoo 78-jir ah, waxaana xubnaha kale ee aaskiisa ka qaybgalay ka mid ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah madaxweynaha Soomaaliya, mas'uuliyiinta Galmudug, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali iyo xubno kale oo fara badan.
"Qof walba waa dhimanayaa, waxaana maanta nala gudboon inaan walaalkeen iska cafinno," ayuu yiri Sheekh Shariif oo sheegay in isaga iyo madaxweynihii dhintay uu ka dhexeeyay xiriir wanaagsan, intii uu isbitaalka ku jirayna uu taleefoonka kula hadli jiray.
Ra'iisul wasaare, C/weli Maxamed Cali ayaa isaguna ka sheekeeyay Taariikhdii Col. Yuusuf, wuxuuna sheegay inuu ahaa muwaadani ku sifoobay wadani jacayl, una hura waqtigiisa sidii Soomaaliya ay u heli lahayd dowlad waarta.
Mas'uuliyiinta kale ee ka qaybgalay aaska ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Puntland, C/raxmaan Faroole iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cadde Muuse, waxaana xubnihii ka qaybgalay aaska ay dhammaantood u duceeyeen marxuumka.
Axad, Maarso 25, 2012 (HOL) — Guddoomiyaha guddiga fulinta ee ururka Ahlusunna Waljamaaca, Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefow ayaa sheegay in ciidamadooda oo kaashanaya kuwa Itoobiya ay la wareegeen deegaanno ay kaga sugnaayeen gobolka Galguduud xoogagga Al-shabaab. Wararkii ugu dambeeyay xiisado dagaal oo ka taagan deegaanno ka tirsan Gobollada Galguduud iyo Hiiraan 3/25/2012 6:05 AM EST